Asikwazi ukusombulula iingxaki kwihlabathi ngokucinga nokuthetha, kodwa ngale ndlela: uMartin Vrijland
Asikwazi ukusombulula iingxaki kwihlabathi ngokucinga nokuthetha, kodwa ngale ndlela:
Kufakwe kuyo UKUBHALA	by UMartin Vrijland	21 Juni 2019	• 3 Comments
Ngaphambili ndathumela kwividiyo evela kuRoald Boom, endiyaziyo mna, kodwa apho ndibukele ividiyo ye-YouTube ngaphambi kwe1x. Kwintetho engezantsi (endiyifumene nayo), uRoald uya kusondela kwintetho yam. Uthi ingxelo kaEinsteinAsikwazi ukusombulula ingxaki kwizinga elifanayo lokucinga"kufuneka ishintshwe ibe"Asikwazi ukusombulula ingxaki kwizinga elifanayo lokuqonda". Uvakalisa ngendlela ecacileyo necacileyo into endizame ukuyicacisa kwimigangatho yam yakutsha nje, apho ndizama kuqala ukuvusa umfundi kwi-media collective hypnosis kwaye ke ndenze ukutshintshelwa kwinqanaba elibalulekileyo lokuqonda. Yingakho ndiyathanda ukusebenzisa ividyo yakhe apha, apho ndifuna ukunika ezinye izongezo, ukuze ube nethemba lokuba ubone umfanekiso ngokupheleleyo.
Ukuvela kwendalo nobomi bakho buvelaphi?
Ukuqonda kakuhle kukuqala ukulungiselela ukuchaza intsingiselo yemvelaphi yethu. Ndicela ukuba ubeke iinkolelo zakho okwethutyana kwigumbi lokulinda ukuzama ukucinga. Unokholo kumntu wobuqili okanye inkunzi enkulu. Kukho inyaniso kubo bobabini. Okokuqala, makhe senze into yokucinga; nje ukusetyenziswa, ukuze ndibuyele 'kwindalo' okanye 'inkulu' inkolelo yenkqubo. Makhe sicinge ukuba imvelaphi yento yonke ukuhamba kweenkcukacha ezivela kuyo yonke into kunye nokuba ukuhamba kweenkcukacha zonke ezibandakanya yonke i-intlanzi yinto esetyenziswa kuyo. Makhe sithethe ukuba luhlobo lolwandle lwazo zonke iziganeko ezinokuthi ziqulethe izinto ezivela kumbindi ukuya kumandla, ukwenza kunye nokungenasimo. Uhlobo lwe-cell stem yobomi, indalo kunye nayo yonke into. Ukuthelekiswa nesisele se-stem mhlawumbi kulungele ukuba kukho, kuba kwenzeka njani ukuba le ngxowanxu yomzimba womntu iqulethe yonke inkcazelo malunga nayo yonke inxalenye yomzimba. Ngoko ke uRoald Boom ubiza 'insimu ye-quantum' kwividiyo engezantsi, ndingathanda ukudibanisa nelo 'li-cell stem'. Khumbula le ngqungquthela ye-stem xa uqaphela ividiyo.
Indalo okanye ibhangi elikhulu?
Ukuba sicinga ngethuba elithile ukususela kweso sihlunu sekhokho (ndiyazibiza ngokuba yiyo yonke into), ngoko ke umbuzo oyintloko usekhona: "njani loo nto isenza i-cell cell?" Ngoko: "njani umjelo wolwazi olubandakanya yonke (insimu ye-quantum) ivela kuyo yonke into eyenziwe?"
Kwimodeli echazwe apha (ingcamango yokucinga) ndicinga ngokukhawuleza ukuba amaziko ngamanye ayenze (iiseli). Amandla omntu ngamnye okwenza ukuba abe nemfuneko yokunika ubungqina obuninzi. Inkolo isondele ngaloo ndlela inyaniso, kuba nantetho ixutywa noothixo, iingelosi kunye needemon (imithombo yamandla ngamnye, amafom, amaqumrhu). Ngenxa yokulungelelanisa, masibize le 'selinye' okanye 'abayilili'. Ndenza izibonda ezinkulu apha, kodwa ukuba sinokucinga ukuba kuya kuba 'kwizinto' ('ikhowudi yomthombo wonke ohlanganisiweyo', 'insime yamandla emithombo' okanye 'umthombo wolwazi lokuhamba', 'insimu ye-quantum') ifom, ngoko ke umzekelo ongcono kakhulu esinayo kulo mhlaba wezinto ezibonakalayo yi-cell stem.
Ukufuna ukuyila ikhowudi yokufumana yonke into kwisitampu se-stem yinto esingenakuyenza, kodwa kwenzeka. Iiseli ziqala inkqubo yoyilo kunye nolwazi oluvela kwi-cell stem. Ngoko ke singakwazi ukuthetha ukuba 'umthombo wolwazi lokugeleza' uqobo unyanzelekile ukunika isimo (ukudala). Olu luhlu olubanzi lweenkcukacha lubonakala luyinqobo kubomi bethu. Oothixo okanye amaziko (ubuncinane: oko sikubiza ngoko kwihlabathi lethu lembono) ngoko ke yiphumo lolo lonke-oluquka ukuhamba kolwazi. Ezi sele zifom. Ezi sele zivele zaziwa "iiseli" ezivela kwi-stem yolwazi lwezityalo.
Ukuze siphendule umbuzo ukuba siphila endalweni okanye kwindalo yonke eyenziwe ngokuziphendukela kwemvelo, kwi-big bang, kufuneka sijonge i-quantum physics. Uvavanyo oluthatyathwe kabini ngososayensi wesendalo uNiels Bohr wanyakaza umsebenzi ka-Einstein kwi 'Theory of Everything' (TOE) kwiziseko zayo. Kwaye kwagqithisa ngokupheleleyo iingcamango zika-Einstein (ezifana neengcamango zendawo kunye nesantya sokukhanya-njengomda ngenxa yolu vavanyo lwe-quantum exanglement). Niels Bohr wabonisana naye uvavanyo oluphindwe kabini ukuba umbonisi uyadingeka ukudala umba. Ngaphambi koko, i-package kuphela. Oku kukhokelela kwisigqibo sokuba siphila kwiimeko ezifanayo (apho 'ukuhlala' akukona okwenziwe ngokuchanekileyo), apho iqela langaphandle lingumdlali owaziwayo (kumdlali-mlinganiso womdlali). Ukuqinisekiswa okubanzi kwesi sigqibo kungafumaneka kule ngcelele yamanqaku (jonga apha en apha).
Ngoku ukuba ivela kule "stem cell" yolwazi oluhambayo (oko uRoald Boom abiza "insimu ye-quantum") "ifomu" yenzele, ngoko singabiza le "fom" iiseli zokudala ezaqala kwakhona inkqubo yokudala (njengokuba zomzimba izitho kunye namalungu). Ngoko sinokuthi le nto iifom zefom yethu ifomu. Emva kokusasazeka kwedatha yomsakazo (isalathisi se-stem yobukho, insimu ye-quantum), 'ifomu' yenziwe. Singabiza okokuqala 'ifomu' 'intliziyo' okanye 'umphefumlo' okanye 'into'. Wonke la mazwi angcolileyo kwiminyango yokomoya nangokwenkolo, kodwa makhe sikhethe 'ukuqonda' ukuze kube lula ifom e yenziwe. Ngokokuqala kwakukho 'yonke into' kunye nokuqonda. Ubunono ke ngokohlobo oluthile olubunjwa kwiseli ye-stem. Nangona kunjalo, zombini unye ngenxa yokuba enye ingumphumo womnye, kodwa iseli ayikwazi ukwenza ngaphandle kolwazi lwe-stem yolwazi (umgca wolwazi lonke). Zomibini zihlala zikho ngokufanayo.
Kulo msebenzi wobusuku bobusuku siza kukhwela kwisidingo sesigqeba (ukuqonda / ifomu) ukunika ifom yeyona (ukwakha izitho). Ngoku siyazi kwizinto ezibonakalayo zezinto eziphilayo ukuba amangqamuzana amabi nawo angayenza. Ukuba sijonge umzimba womntu, akuphelelanga kangangoko singagula. Nangona kunjalo, intsholongwane ingaba vavanyo lwenkqubo kwaye yandisa ukwanda.
Ekusebenziseni kwethu ukucinga, makhe sicinge ngethuba elithile ukuba i-consciousness yethu yenziwe ngokukodwa kwikhowudi yomthombo (intsimi ye-stem / insimu ye-quantum) kwaye ngoko sonke sivela kwizinga elilinganayo, kodwa sonke sinomsebenzi ohlukile. Emva koko, emzimbeni omnye iseli enye sele ifumene iphakheji eyisiseko yolwazi kwi-cell stem ukuze yenze iqumrhu elinye lilungu. Ngoko ke siyinqanaba elilinganayo, kodwa asifani, kuba sinomsebenzi owenziweyo woyilo.
Ukuba ufunde amaqaku am malunga nokumlinganisa, ndingathanda ukubonisa ukuba kubonakala kukho enye inxalenye (uhlobo lwentliziyo) ebonakala libenomsebenzi wokwakha inkqubo yesifo segciwane. Uhlobo lwenkqubo yovavanyo lomzimba wonke owenziwe kwi-cell stem. Le ndlela yeLuciferian yolwazi iye yakha (isifo segciwane). Emva koko, i-quantum physics ibonisa ukuba "siphila" kwisiganeko (ukuqonda / ukudlala). Ngaloo ndlela, uLusifire unkulunkulu (umakhi) walo mzekeliso. Oku kuchaza zombini ibali lokudala kunye nenkolelo enkulu ye-bang ukuya kumlinganiselo omkhulu okanye ngaphantsi. Kwimeko ye-big bang ungatsho ukuba le yithuba apho ukutshatyalaliswa kwatshintshwa. "Phonsa!" Ngokukhawuleza yonke into yayikho. Iimbali zeNdalo zichaza iziqalo ezenza ukulinganisa (kuqala ukukhanya kunye nomnyama, ngoko izulu, umhlaba, umhlaba, ulwandle, njalo njalo). Inkolelo yokuziphendukela kwemvelo inokuthelekiswa ne-Sims esezantsi kwiSims yehlabathi (bona apha) bafune imvelaphi yobukho babo kwaye bazame ukwenza uhlalutyo lwembali kwiSims yabo kunye nokuqonda.
Ukuba ufunda amaphepha am, unokufumanisa ukuba sisemnyango uhlobo lokuqonda (ngubani ohlonishwayo njengo "thixo" ovela kwi-Sims yethu yangempela kwaye unokuqatshelwa njenge) Lucifer ubomi obunjengobomi bezilwanyana. Ungakubiza kwakhona inkqubo yovavanyo; inkqubo yentsholongwane ejoliswe ukuvavanya ezinye iifom zokuqonda (iiseli). Asikwazi ukuqonda kuphela iimvavanyo ze-physum ze-physum ukuba yinkqubo yokuvavanya intsholongwane yegciwane, kodwa kunye neskripthi kunye nobunye. Ndiyichaza oko eli ngundoqo (Ndiyincoma ukuba uyifunde loo ngqalelo ngokucophelela).
Ukuhamba kweenkcukacha zonke, insimu ye-quantum
URoald Boom ubiza lo lonke uququzelelo lwenkcazelo (esiyithelekisa kunye neselithi ye-stem ukuze kube lula) insimu ye-quantum. Ngoko emva kokuba insimu ye-quantum ivela ubuninzi. Iqulethe igama elithi 'single', elithetha 'umntu'. Ukuba sijonge i-cell stem kunye nendlela ezahlukeneyo zeeseli ezinomsebenzi ezahlukeneyo emzimbeni okanye kuzo zonke iifomu ze-biological, ngoko ziyimfomfom; iinkampani ezizimeleyo ezenziwe kwimihlaba ye-quantum (i-stem cell information flow flow). Kulo nqanaba, enye ayifani nenye. Omnye unomsebenzi owenziwe ngokwahlukileyo njengomnye. Ukuba inkqubo yesifo se-simulation eyenziwe yi-Lucifer iqumrhu lihloselwe ukuvavanya ezinye iiseli ngamandla abo, ngoko siyakwazi ukufumana ikhowudi kwintsimi ye-quantum engabangela ukuba intsholongwane iphele.
Emva kwakho konke, sonke sivela kuloo mjelo yolwazi yonke (i-field sumum / i-stem yolwazi lomgca wolwazi). Ngoko ke xa sizama ukucombulula iingxaki zeSims ukulandelelana kwi-Sims okanye amava we-avatar, ngoko sitshintsha umdlalo ngaphakathi. Oku akunakwenzeka. Umakhi wesimanganiso uya kuhlala eqinisekisa ukuba 'inkqubo' iwina. Iingcamango zakho kunye nengqondo yakho ziyinxalenye yeSim yakho kumdlalo; avatar yakho kwisimo; wakho umzimba. Awuyena umzimba wakho: uyayiqonda (ifom yobuninzi evela kwi-stem yolwazi ye-cell / flowum field). Indlela kuphela yokulungisa okanye ukuyeka ukufaniswa kukukwenza oku kwinqanaba leprogram. Ngenxa yoko oko kwenzeka kwiinombolo (ifom / nganye yefom yefom yefom), apho zonke iifom zenkampani zilingana kodwa zinomsebenzi ohlukile. Ukususela kuloo ndawo sinokubamba ukuhamba kweenkcukacha ezisisiseko.
Ulawulo lwe-Virus kwizinga lokuqonda
Ungathi kwakhona akufuneki sikhathazeke ngeengxaki ezikulo mzekeliso, ngaba kwakungekho ngenjongo yesistim ye-virus: ukuyitshintsha nokuyilungisa. Umzimba wakho unako ukusinda kuhlaselwa yintsholongwane. Indlela yakho yokuqonda (umphefumlo okanye nayiphi na into ofuna ukuyifowuna) ngoko unokukwazi ukusukela ekuhlaselweni kwintsholongwane. Nangona kunjalo, sicinga ukuba sifanele senze oko kwiSims level level. Oko cinga Nangona kunjalo, yona ngokwayo iyinqanaba leSims. Inxalenye yeso sifo. Ukunqoba kwenkqubo yegciwane kwintsholongwane yentsholongwane. Akuveli ngaphakathi, kodwa ukusuka ngaphandle. I-Lucifer ifom yefom yefom, enomsebenzi wayo wokuvavanya ezinye iindidi zokuqonda ngenxa yamandla abo kunye nokwakhiwa kwelo gciwane, kufuneka ke idibaniswe kwinqanaba lequmrhu. Ngoko oko kwenzeka kwinqanaba lokuqonda.
Ukuba uRoald Boom uthe zonke iifom ziyaxeshanye, ngoko oku kuchanekile. Yibambe emfanekisweni wegeyimu yePlaystation okanye umdlalo we-Sims apha ngentla. Makhe sicinge ukuba iinkcukacha ezininzi (imiphefumlo okanye nayiphi na into ofuna ukuyibiza) sele ithathelwe kwinkqubo yegciwane le-Luciferian. Ngoobani abadlali begeyimu yomdlali onjalo? Ngoobani abadlali beqela lomdlali we Playstation okanye umdlalo we-Sims. Laba ngabantu abajongayo kwesikrini kunye nomlawuli kwiqhekeza. Ngoko ukujonga kwakho kubonakala kwaye kuyadlala kunye nale nkqubo yesimo segciwane, kodwa ngexesha elifanayo livela kwintsimi ye-celem cell quantum. Uyakwazi ukuqonda kwaye usasensimini ye-quantum. Isisombululo sesisombululo sezinto zonke sihlala kwintsimi ye-quantum.
Ukuyibeka ngokulula, imifanekiso elandelayo ingaba yile: Ukuba wenza i-typo kwesikrini sakho, ngaba ubeka uhlobo lwekrini kwiskrini, uthathe i-eraser, kwaye uzama ukususa iileta kwesikrini sakho okanye ukutshintsha kwinqanaba leprojekthi yegama? Ngoko kufuneka sifumane isisombululo kwintsimi ye-quantum. Yingakho ndicinga ukuba ividiyo ephantsi kweRoald Boom ibaluleke kakhulu.
Ukusetyenziswa kwegama elithi "ubuncwane" lwamkelwe yimida ye-transhumanism kwaye ikhuthazwa ngabantu abafana neentloko zobuchwepheshe beGoogle ray Kurzweil. Le ngongoma ye-Luciferian ye-virus ye-virtual simulation system, apho indlela yokubuyela kwi-singular iphakanyiswa ngendlela yokufutha kwintsholongwane. Konke oku kufuneka kuhambisane nokuhlanganiswa kunye ne-AI kunye nokuguqulwa kancane kancane komzimba womntu kwii-cyborgs ezimele ziphelelwe kwifu ngeDNA kunye nengqondo. Ngoko isilumkiso sam kukuba asifanele sidibanise nale ngqungquthela kunye nobuxoki obungenanto, okanye inkolo, kuba sidibanisa ne-virus ye-Luciferian efuna ukuzondla ngokwayo kwintsimi ye-quantum. Sinokuqhawula le nkqubo yegciwane lesifo se-Luciferian ukusuka kwinqanaba lokuqonda, ubuncinci kunye nensimu ye-quantum. Ngoko icebiso lam lifana noRoald Boom: kusenokuba kunokwenzeka kwaye ukhumbule indlela yakho yokuqonda.
Ndiyaqaphela ukuba 'indalo yonke' yinxalenye yamava kaLuciferian (njengezithunywa zezulu, iidemon okanye i-jinns ezikhankanywe ngasentla: bonayo apha), kodwa ngandlela-thile ndiyayithanda inkcazo kaRoald.
Kubafundi abaninzi, oku ngasentla kunokuba lube nolwimi olungapheliyo. Imiphefumlo eyaziwayo, mhlawumbi ipenki iyawa.
Kutheni ukhetha okanye ungakhethi i-transhumanism kunye nobunye (uhlala kwikhompyuter ye-AI)?
Kutheni uLuciferianism, ubuqhetseba kunye nokuguqulwa kwezinto eziguqukayo ziba ziqhelekileyo
Ukuba iziprofeto ziyazaliseka, ngaba bubungqina bokuba bakholelwa inyaniso?
tags: ukuqonda, nqanaba lo kuqonda, boom, cinga, denkniveu, eziziimbalasane, ngcamango, kwintsimi yenani, lucifer, izinga, big bang, Unqulo, URoald, URoald Boom, Indalo, ukulinganisa, ubuninzi, yokuzonwabisa, fanayo
21 Juni 2019 kwi-16: 32
Abadlali behlabathi jikelele kule ajenda ye-AI yi-idd Kurzweil, kodwa no-Eric Schmidt (i-Alphabet) no-Peter Thiel. Imizobo yokugcina iso ...
Ukuze ufike emaphethelweni olwazi lwehlabathi, khangela iingqondo eziyinkimbinkimbi kunye neziyinkimbinkimbi, uzibeke egumbini kunye, kwaye zicele ukuba zibuze imibuzo abazibuza yona.
22 Juni 2019 kwi-15: 02
unxibelelwano lwe-salmon, ubone apho ummangali oqhelekileyo u-Mengele Plasterk usebenza ... Unomonde / i-Mytommorows
Iiprogram zokuFikelela kwangethuba ◆ zibuza ukuba zininzi iinxalenye ze-nano zivavanywa
JV wabhala wathi:
23 Juni 2019 kwi-18: 06
Ndiyabulela le ngqayi yokukhanyisa, enye ingcezu!
« U-Anja Schaap ufumene efile elwandle ngaphezu kweeWadden Islands, kodwa yiyiphi iinqanawa (myshiptracking.com)?
AmaDatshi ayengazi imeko abayiyo: ukuhlolwa kwejele laseStanford »
ukusuka ngoFebruwari 2020
Iindwendwe ezipheleleyo: 2.559
Kutheni indalo iyikhaya lakho lokwenyani?
Ngaba iTurkey iza kuyithatha i-Syria kwaye kuthetha ntoni ukuba ubudlelwane kunye ne-US, i-Russia ne-Iran?
Incwadi evela kwi-2016 Amehlo oMnyama nguDean Koontz athetha nge-bioweapon ye-Wuhan-400 virus
Kutheni sishumayela ikopi yendalo yonke enobomi beminyaka engama-7000
NguJan Holland op Ngaba iTurkey iza kuyithatha i-Syria kwaye kuthetha ntoni ukuba ubudlelwane kunye ne-US, i-Russia ne-Iran?
Cubungula op Ixesha lesenzo!
SalmonInClick op Ixesha lesenzo!
SandinG op Ixesha lesenzo!
Ilanga op Ukwenza njani ukugxekwa komgaqo-nkqubo wombuso? Spin ibali "loMyili weRypke Sail"
SEARCH (Google kwisayithi)
Emva kwezigcawu abantu bebesebenza kwitekhnoloji kunye nogcino lweedatha lweentsuku. Itheyibhulethi yezibalo iguqulwe yaba nkulu kakhulu kwaye sele icwangcisiwe. Ukususela ngoku, ingqalelo inokubuyela ekubhaleni amanqaku akhanyayo kunye nokhanyayo. Umonde nenkxaso yakho iyabulelwa!